नेता विदेशमा, चिकित्सक गर्छन स्वदेशमै उपचार, अधिकांशलाई प्रेसर र ढाडकै समस्या | Hamro Doctor News
सोमबार, ६ फाल्गुन २०७५ /
नेता विदेशमा, चिकित्सक गर्छन स्वदेशमै उपचार, अधिकांशलाई प्रेसर र ढाडकै समस्या
काठमाडौं ९ साउन । बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा तल्लिन चिकित्सकहरु आफै बिरामी छन् । तर, उनिहरु स्वदेशकै चिकित्सकहरुसंग उपचार गराउँदै आएका छन् । नेपालमा उपचार नै सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै उनिहरु बिदेश जाने गर्छन । आफ्नै सहपाठीहरु माझ चिकित्सकहरले उपचार गराउँदै आएका छन् । सामान्य देखि ठुला रोगको उपचार पनि चिकित्सकहरु स्वदेशमा गराउँछन् । उनिहरु भन्छन, नेपालका चिकित्सक गुणस्तरीय र विश्वासिला छन्, त्यसैले स्वदेशमा उपचार गराउँछौं ।
कुन डाक्टरलाई के समस्या छ ?
डा. जागेश्वर गौतम
स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ, थापाथली
मलाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ । प्रेसरका कारण मैले ५ बर्ष देखि निरन्तर औषधि सेवन गरिरहेको छु । कहिलेकाँही निकै समस्या बनाउँछ । प्रेसर बाहेक कुनै पनि रोग अहिले सम्म देखिएको छैन । ओम अस्पतालमा कार्यरत मुटुरोग विशेषज्ञ डा. चन्द्रमणी पौडेललाई नियमीत स्वास्थ्य परिक्षण गराउँदै आएको छु ।
डा रमेश सिंह
अर्थोपेडिक, नेपाल मेडिकल कलेज
विगत तीन वर्ष देखि मलाई सुगर र प्रेसर छ । नियमीत औषधि सेवन गरिरहेको छु । हरेक ६–६ महिनामा स्वास्थ्य परिक्षण गराउँछु । यस बाहेक अरु कुनै पनि रोग लागेको छैन । नेपाल मेडिकल कलेजका डा. प्रमोद क्षेत्री र युएन पाठकलाई नियमीत स्वास्थ्य परिक्षण गराउँछु । नेपाल भन्दा अन्त गएर स्वास्थ्य जाँच गराएको छैन । नेपालको चिकित्सकको जति विश्वास लाग्छ विदेशका चिकित्सकको विश्वास त्यति मात्रामा छैन ।
नाक, कान, घाटी रोग विशेषज्ञ, वीर अस्पताल
२०५६ साल देखि मलाई ब्लड प्रेसरको समस्याले सताएको छ । मेरो परिवारमा पनि प्रेसरको समस्या भएकाले त्यसको प्रभाव मलाई परेको हो । प्रेसर भएको जानकारी पाए देखि नियमीत औषधि सेवन गरिरहेको छु । विभागीय डाक्टरहरुबाटै हरेक वर्ष स्वास्थ्य परिक्षण गराउँछु ।
डा. लोचन कार्की
बरिष्ठ फिजिसियन, वीर अस्पताल
अहिले सम्म कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन जसले औषधि खानु परोस । नियमीत बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा खटिएका कारण ढाड दुख्ने समस्या भने छ । ढाड र गर्धन दुख्छ तर, औषधि सेवन गर्नुपरेको छैन । आफै फिजिसियन भएकाले स्वास्थ्य परिक्षण गराएर रिपोर्ट हेर्छु । पछिल्लो समय ब्लड प्रेसर बड्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य जाँच गराउँछु ।
डा. मान बहादुर केसी
बरिष्ठ, मुटुरोग विशेषज्ञ, मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टर
मलाई स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन । गाउँमा जन्मेको खेलेका कारणले पनि होला अलिहे सम्म स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर औषधि खाएको छैन । घर परिवारमा कसैलाई रोग छैन । मुटुरोग विशेषज्ञ भएका नाताले पनि प्रत्येक वर्ष मुटु सम्बन्धी सम्पुर्ण जाँच गराउँछु । कुर्सिमा नियमीत बसेका कारण र अप्रेशनमा उभिनु परेकाले जोर्नी दुख्ने समस्या छ । मैले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका अर्थोपेडिक डाक्टर दिनेश काफ्लेलाई नियमीत स्वास्थ्य जाँच गराउँदै आएको छु ।
डा. भोला रिजाल
बरिष्ठ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ओम अस्पताल
नियमीत स्वास्थ्य परिक्षणका बेला मुटुमा समस्या देखिए पछि मैले तत्काल उपचार गर्ने निर्णय लिए । नेपालमा सक्षम चिकित्सक र उपकरण भएका कारण मेरो उपचार मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भरत रावल, डा. लव जोशी र डा. यादव भट्टले गरे । अहिले मुटुमा कुनै समस्या छैन । मेरो ढाड दुख्ने समस्या छ । यसका लागि पनि डा. बसन्त देवकोटा र डा. गौरवराज ढकालले हेरेका छन् । अहिले नियमीत स्वास्थ्य परिक्षण ओम अस्पतालमा डा. चन्द्रमणी पौडेलले गर्छन ।
अर्थोपेडिक, टिचिङ हस्पिटल
मेरो स्वास्थ्यमा ठुलो समस्या छैन । समस्या हुदो हो त, म अनशन बस्न सक्ने अवस्थामा हुँदिन थे । स्वास्थ्य जाँच समय समयमा गरिरहन्छु । धेरै कुर्सिमा बसेका कारण सामान्यतया ढाँड दुख्ने समस्या र ग्यास्ट्रीकको समस्या छ । समस्या भएको खण्डमा सामान्य नागरिकले झै अस्पतालमा जो चिकित्सकको ड्युटी छ उसैलाई चेकअप गराउँछु । अनशनका समयमा भने डा. दिव्यासिंह लगायतको टोलीले स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएका छन् । चिकित्सक खोजेर उपचार गराउँनु पर्ने अवस्था भने, अनशन भन्दा अरु समयमा आएको छैन ।
प्रा. डा जगदीश अग्रवाल
डिन, आईओएम, टिचिङ हस्पिटल
मेरो ढाड दुख्ने समस्या छ । तर, हाल केही कम भएको छ । आज सम्म स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएको छैन । आफै चिकित्सक भएको हिसावले सामान्य तथा जाँच आफैबाट हुन्छ । फरक विधाको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपरेको खण्डमा साथिहरुलाई देखाउँछु । विशेषत मैले हाडजोर्नी सम्बन्धी चिकित्सकलाई देखाउँदै आएको छु । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका डा. गोविन्द केसीलाई देखाउँछु ।
डा. सरोज प्रसाद ओझा
मानसिक रोग विशेषज्ञ, टिचिङ हस्पिटल
मलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ । उच्च रक्तचाप भएको लामो समय भएको छ । म नियमीत औषधि सेवन गर्दै आएको छु । मनमोहन कार्डियोभास्कुलर थोरासिक एण्ड ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत डा. रत्नमणी गजुरेल, डा. ओम मुर्ती, अनील डा. यादव भट्ट र डा. दिवाकर शर्मा संग नियमीत स्वास्थ्य जाँच गराउँछु । उच्च रक्तचाप बाहेक कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन ।
डा. भरत कुमार यादव
फिजिसियन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
मलाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ, त्यस बाहेक अरु कुनै पनि समस्या देखिएको छैन । म अरु भन्दा भिन्न छु । मेरो स्वास्थ्य परिक्षण कहिले गराउँने भनेर एकिन नै हुँदैन । आफु फिट छु त्यसैले दुई तीन वर्षमा एक पटक चेक गराउँछु । मलाई पाँच वर्ष अगाडीदेखि नै प्रेसर देखिएको छ । नियमीत औषधि भने खाने गरेको छु । नेपालमै राम्रा र सक्षम चिकित्सक भएका कारण स्वास्थ्य उपचारका नाममा विदेश जानुपरेको छैन । पाटन अस्पतालमा कार्यरत फिजिसियन डा. आशिष श्रेष्ठसँग आवश्यक परे स्वास्थ्य जाँच गराउँछु । दिनभर फ्रेस बन्नका लागि अस्पताल हाता भित्र बिहान भर्निङ वाक गर्छु ।
डा. प्रेमराज ज्ञवाली
यूरोलोजिष्ट, टिचिङ हस्पिटल
दुई वर्ष अघि म बिहान मर्निङवाकमा निस्किएको थिए । स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थिएन । दिउँसो स्वास्थ्य जाँच गर्ने उदेश्यले आफ्नै अस्पताल (शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज) गए । स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा मुटुमा समस्या देखियो । अस्पतालकै चिकित्सकले अप्रेशन गरेर स्टेन्ट हालेका छन् । मलाई सुगर, प्रेसरको समेत समस्या छ । दुई वर्ष देखि निरन्तर औषधि सेवन गरेको छु । मेरो स्वास्थ्य परिक्षण डा. रत्नमणी गजुरेल, डा. ज्योती भट्टराई, डा. यादव भट्टले गर्दै आएका छन् । उनिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण भने मैले गर्दै आएको छु । नेपालमा राम्रा चिकित्सक र उपकरण भएकाले विदेश जादिन ।
डा. केदार नसिंह केसी
छातिरोग विशेषज्ञ, (रिटायर)
मेरो पारिवारीक रोगका रुपमा देखिएको भनेको ढाँड दुख्ने समस्या हो । त्यस बाहेक अहिले सम्म कुनै समस्या देखिएको छैन । खसिको मासु बढी खाएको खण्डमा युरिएसीड बढ्छ । आफै केयर गर्छु । संसारका भन्दा कम चिकित्सक नेपालमा छैनन, त्यसैले गर्दा म नेपालकै चिकित्सकलाई प्रत्येक ६ महिनामा स्वास्थ्य जाँच गराउँछु । विदेश गएर उपचार गर्दा ठुलो मान्छे भईदैन । मेरो स्वास्थ्य परिक्षण डा. मानबहादुर केसी, डा. राजीवराज भण्डारी र यादव देव भट्टसंग गराउँदै आएको छु ।
डा. अनिल भट्टराई
मुटुरोग विशेषज्ञ, मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टर
मलाई अहिले सम्म कुनै समस्या देखिएको छैन । सुगर, प्रेसर सबै ठिक छ । हरेक ६–६ महिनामा स्वास्थ्य परिक्षण गराउँछु । आफै चिकित्सक भएका कारण रिपोर्ट अरुलाई देखाउनु पर्दैन । अरुलाई देखाउँन कै लागि त त्यस्तो रोग नै देखिएको छैन ।
Last modified on 2018-07-25 20:16:21
गोदानले गर्यो ‘कडा आन्दोलन’को घोषणाः शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प !
काठमाडौं ५ फागुन । सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) ले शुक्रबारदेखि कडा...
स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव लामिछाने विरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्धा
काठमाडौं, ५ माघ । स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत उपसचिव बाबुराम लामिछानेलाई...
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप नौ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी चैत मसान्तभित्रमा थप नौ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन...
वीर अस्पतालमा इमर्जेन्सी बिरामीको उपचार र बेवारिसे शव एकै ठाउँ
काठमाडौं, ५ फागुन । देशकै जेठको वीर अस्पतालमा शवगृह नहुँदा बेवारिसे शव र बिरामी एकै...
दर्ता नै नभएको संस्थामा नर्सिङ अध्यापन, नेपालका सयौं विद्यार्थी अन्यौलमा
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायाेजन गर्दा एक तह बढुवा गर्न माग
के घाटिमा सधैं समस्या हुन्छ ? ध्यान दिनुस् यी कुरामा
महिनाबारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा सुरक्षित ?
स्ट्रोक:साढे चार घण्टाभित्र उपचार नगरे ज्यानै लिन्छ (भिडियोसहित)
बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर कुन हो ? जानौं (भिडियोसहित)
मातृ मृत्युको प्रमुख कारण गर्भावस्थाको लापर्वाही
विज्ञान तथा प्रविधि सम्मलेनमा 'हाम्रो डाक्टर' एपको प्रस्तुति